Maxaa ka dhacaya bartaada hadda? | Martech Zone
Maxaa ka dhacaya bartaada hadda?
Monday, August 15, 2011 Khamiista, Oktoobar 27, 2011 Douglas Karr
Inta badan macaamiisheennu waxay dib u eegaan tooda Analytics maalin kasta ama toddobaadle ah. Waqtiyada qaarkood, way la yaabaan natiijooyinka. Waxaa laga yaabaa inay ahayd xusid baloog kale, daabacaad ama bogga calaamadeynta bulshada. Dhibaatadu waxay tahay inaysan arkin haddaSee waxay arkaan 8 ilaa 24 saacadood dhacdada ka dib.
Inta badan suuqgeynta ayaa ku saabsan waqtiga iyo xawaaraha. Berrito badanaa waa goor dambe in la isku dayo in la kordhiyo kororka taraafikada. Waqtiga aad ku aragtid xirmadaada Falanqaynta, way dhammaatay. Waqtiga dhabta ah Analytics waa furaha istiraatiijiyaddan. Maalgelinta waqtiga dhabta ah Analytics wax soo saarka sida Dib-u-xoojin (Waxaan ahaa isticmaale aasaasay Reinvigorate - oo uu dhawaan iibsaday macmiilkeenu Webtrends) ayaa ku siin kara macluumaadka aad u baahan tahay.
Qiimaha arjiga sidan oo kale waa mid magac u yaal ah .. laga bilaabo $ 10 bishiiba. Taasi waa qiimo yar oo la siiyay qaar ka mid ah astaamaha. Awoodda aad u leedahay inaad aragto inta qof ee booqanaya bartaada saacad walba, khariidadaha ku-meel-gaadhka ah ee waxqabadkooda, raadintooda dhaqdhaqaaqooda ee goobta, iyo xitaa ku arkidda waxqabadyada booqdayaasha loogu magac daray goobta.
Aqoonsiga dhaqdhaqaaqa goobtaada waqtiga-dhabta ah ayaa ku siin kara macluumaadka aad u baahan tahay inaad sameyso degdeg ah isbeddellada, ku dheereynta xogta ku-meel-gaadhka ah adoo isla markiiba fulinaya dallacsiinno kale, wax ka beddelka waxyaabaha aan shaqeynin saacado gudahood markii la daabacayo… liistadu way sii socotaa oo way socotaa.
Sahanku wuxuu Yiraahdaa: Waqtiga Lagu Bixiyo Baraha Bulshadu waa Waqti Wanaagsan
michele ka sii fog
Aug 19, 2011 at 4: 16 AM
Waad ku mahadsan tahay sheegista Doug. Dhamaanteen waan ku faraxsanahay arintaas. Lagu dhajiyay bartayada dhawaantan waana soooo qabow. Ma sugi karo inaan u arko olole cusub oo bilaabmaya waqtiga soo socda! Maalin wanaagsan.
Aug 19, 2011 at 4: 26 AM
Waa madal aad u fiican waxayna buuxineysaa farqi yar oo wanaagsan oo ku jira qaybta alaabta Webtrends hadda leedahay. Dadyahow waa yaabe!